Maitiro ekuisa Java 8 paDebian Jessie | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Java iri kuve isinganyanyo shandiswa mitauro yemutauro, ichokwadi kuti kuchine zvikumbiro zvakakosha izvo zvinoda uyu mutauro wehurongwa uye nemuchina wacho chaiwo. Zvirongwa zvakaita seLibreOffice kana mabhurawuza ewebhu achiri kuda iyi yekuwedzera.
Tevere tinokuudza maitiro ekuisa java 8 pane yedu Debian Jessie, yakapusa uye yakapusa maitiro ayo isu atinongoda chete chinongedzo uye neInternet kubatana.
Pane nzira mbiri dzekugadzira Java 8 pane yedu Debian Jessie. Yokutanga ndeye shandisa Java 8 mushe uye isa iyo mukugovera kwedu. Nzira yechipiri ndeye gadza mune yedu OpenJDK kugovera, yemahara imwe nzira kuJava 8 inoshanda zvakafanana neJava asi yakasununguka zvachose.
Kuisa Java 8 nekukurumidza tinofanirwa kuvhura terminal muJessie uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvichaisa Java 8 paDebian uchishandisa iyo Webupd8 repository, inozivikanwa yakakosha repository ine zvirongwa zvakakosha senge Java 8. Zvisinei, izvi zvinongoisa Java 8 paDebian Jessie, ikozvino tinofanirwa kutaurira kugovera kuti tishandise Java 8 pazvinenge zvichidikanwa. Kuti uite izvi, kubva kune imwechete terminal tinonyora:
Zviripo imwezve nzira kuitira kuti zvirongwa zvinoshandisa Java zvikwanise kushanda pasina kuva nezvirongwa zvemba. Kune izvi isu tichaisa OpnJDK, chirongwa chinoshanda zvakafanana neJava asi iri yemahara vhezheni. Kuisa OpenJDK isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Uye neiyo OpenJDK ichaiswa. Zvino, senge nenzira yapfuura, isu tinofanirwa kutaurira Debian Jessie izvo shandisa OpenJDK sechirongwa chekumisikidza chero munhu anokumbira kushandiswa kweJava. Saka isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Chero dzedzimwe nzira dzichaita kuti Java 8 ive pakombuta yedu, kana zvirinani ichaita kuti mashandiro edu ashande nemazvo pasina kushandisa zviwanikwa zvihombe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Java 8 paDebian Jessie
Ngirozi Romero akadaro
Ndatenda zvikuru zvakandibatsira zvakanyanya sezvo ndaida iyo openjdk
Pindura kuna Angel Romero
Chrome 59 yakabuda neWayland uye GTK 3 + yakabatanidzwa